Tag: Sendgrid | Martech Zone
ActionIQ: Ọgbọ Ndị Ahịa Na-ahụ Maka Ndị Ahịa Na-esote Iji Hazie Ndị Mmadụ, Teknụzụ, na Usoro
Y’oburu na gi bu kompeni n’emesara kesaa data n’ime otutu sistemụ, ebe Onye ahia ndi ahia (CDP) choro. A na-ejikarị usoro eme ihe maka usoro ụlọ ọrụ dị n'ime ma ọ bụ akpaaka… ọ bụghị ikike ịlele ọrụ ma ọ bụ data gafee njem ndị ahịa. Tupu Platform Data Ndị Ahịa abanye n'ahịa, ihe ndị dị mkpa iji jikọta nyiwe ndị ọzọ gbochiri otu ndekọ nke eziokwu ebe onye ọ bụla nọ na nzukọ ahụ nwere ike ịhụ ọrụ dị gburugburu
CleverTap: Nchịkọta Ahịa Azụmaahịa na Segmentation Platform
Fraịdee, June 15, 2018 Fraịdee, June 15, 2018 Douglas Karr
CleverTap na-enyere ndị na-ere ahịa mkpanaka nyocha, nkewa, itinye aka na tụọ mbọ ha na-azụ ahịa na ekwentị ha. Ikpokoro ahia nke mobaịlụ na-aghota ihe omuma nke ndi ahia nke oma, injin nkewa di elu, na ihe ndi di ike na ntinye aka n'ime ihe omuma ahia, na-eme ka odi nfe ichikota, nyocha, na ime ihe omuma nke ndi ahia na milliseconds. Enwere akụkụ ise nke ikpo okwu CleverTap: Dashboard ebe ị nwere ike ịkekọrịta ndị ọrụ gị dabere na omume ha na njirimara profaịlụ, na-agba ọsọ mgbasa ozi ndị a
Sendwithus: Dezie, Nnwale na Tụọ Ọrụ Mgbasa ozi Email
Mọnde, Febụwarị 10, 2014 Mọnde, Febụwarị 10, 2014 Douglas Karr
Ọ bụrụ na ị bụ ikpo okwu na-eziga ozi ịntanetị azụmahịa, ị nwere ike ịchọpụta na ha nwere koodu nzuzo na njedebe na-esikwa ike gbanwee na-enweghị enyemaka onye nrụpụta gị. Ozi ịntanetị azụmahịa bụ ozi ịntanetị e zigara ndị mmadụ na ị nwere njikọ aka na azụmahịa ma ha anaghị enwe ike irube isi n'iwu (nke ahụ pụtara na ha anaghị achọ njikọ wepu aha). Azụmahịa ma ọ bụ sistemụ arụmọrụ na-ebuli elu ma pịa site na ọnụego yabụ ọ bụ ezigbo ohere ịzụ ahịa
Nlekọta Ndepụta Email Email
Kedu mgbe oge ikpeazụ ị ghagharịrị ihe omume email gị iji hụ na e depụtara ndepụta email gị nke ọma na ndị debanyere aha na-enweta ozi ha chọrọ? Ya mere, ọtụtụ ndị na-ere ahịa na-acria ntị naanị na nnukwu ndị debanyere aha… obere ndepụta email na ọdịnaya ezubere iche mgbe niile karịa mgbasa ozi mgbasa ozi. Nke a bụ ozi mmezi zuru oke, natara site na WebTrends: A na-ekewapụta isiokwu ndị ahụ nke ọma ma na-emelite ihe m chọrọ naanị otu pịa. Ọ bụrụ n’ịnwere ike ijide mmasị ndị debanyere aha